iOS 15.1 | တွင် ဘာများ အသစ်ပါလဲ။ အိုင်ဖုန်းသတင်း
Apple သည် ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က ကြေညာခဲ့သည့်အတိုင်း iOS 15 ၏ ပထမဆုံးသော အပ်ဒိတ်ဖြစ်သော iOS 15.1 ကို ယမန်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်း (စပိန်စံတော်ချိန်) တွင် ထွက်ပေါ်လာသည့် အပ်ဒိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အမျှော်လင့်ဆုံးသောအင်္ဂါရပ်အချို့ Apple သည် ဤဗားရှင်း၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းနှင့် iPhone 13 အသစ်သို့ရောက်ရှိသွားသော အချို့သောဗားရှင်းများတွင် မပါဝင်ခဲ့ပေ။
သငျသညျလိုလျှင် သတင်းအားလုံးကိုသိတယ်။ iOS 15.1 နှင့် iPadOS 15.1 တို့မှ ရရှိထားပြီးဖြစ်သော နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းသို့ အပ်ဒိတ်လုပ်ပြီးပါက ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
3 Macro လုပ်ဆောင်ချက်
4 iPhone 12 ဘက်ထရီ စီမံခန့်ခွဲမှု မြှင့်တင်မှုများ
5 HomePod သည် Lossless Audio နှင့် Dolby Atmos ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
6 မူလစာမျက်နှာ App
7 iPad ပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်စာသား
9 Wallet တွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးကတ်
11 MacOS 15 Monterey ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။
SharePlay သည် ဖန်တီးထားသော လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လူတွေကို နီးနီးကပ်ကပ် နီးနီးကပ်ကပ်နေနိုင်အောင် လုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့် မိသားစုများနှင့် အဆက်အသွယ်မပြတ်စေရန် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ရောဂါ၏ လိုအပ်ချက်အရ ပေါက်ဖွားလာသော FaceTime လုပ်ဆောင်ချက်ကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ဤအင်္ဂါရပ်သည် ပါဝင်သူများကို ပါဝင်ခွင့်ပြုသည်။ တေးဂီတ၊ စီးရီးနှင့် ရုပ်ရှင်များကို တစ်ပြိုင်တည်းဖွင့်ပါ။ ဒါကြောင့် သူတို့က တစ်ခန်းထဲမှာ အတူတူရှိနေသလိုမျိုး မှတ်ချက်ပေးတယ်။
ထို့အပြင်လည်းခွင့်ပြုပါတယ် သင်၏ iPhone၊ iPad သို့မဟုတ် Mac မျက်နှာပြင်ကို အခြားသူတစ်ဦးဦးနှင့် မျှဝေပါ။ခရီးတစ်ခုစီစဉ်ခြင်း၊ သူငယ်ချင်းများနှင့် hangout ပြုလုပ်ခြင်း၊ တစ်စုံတစ်ဦးအား ၎င်းတို့၏စက်ပစ္စည်းကို စနစ်ထည့်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းတို့ကို ကူညီပေးခြင်းအတွက် စံပြလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
iPhone 13 အကွာအဝေးကို မိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် Apple သည် ProRes ဟုခေါ်သော ဗီဒီယိုရွေးချယ်မှုအသစ်ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှုပုံစံ ပိုမိုမြင့်မားသောအရောင်သစ္စာရှိမှုနှင့်ဗီဒီယိုချုံ့မှုနိမ့်ကျသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံသွင်းမှုများတွင်အသုံးပြုသည်ဖြစ်သောကြောင့်အသေးစိတ်အချက်များစွာဆုံးရှုံးသွားသည်
ဒီ feature iPhone 13 Pro နှင့် iPhone 13 Pro Max များတွင်သာ ရနိုင်သည်။မှတ်တမ်းတင်ရုံသာမက ၎င်းတို့၏ စက်များမှ ဖန်တီးထားသည့် ဗီဒီယိုများကို တည်းဖြတ်ပြီး မျှဝေနိုင်သည့် အသုံးပြုသူများ။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို Camera - Formats - ProRes အပလီကေးရှင်းဆက်တင်များတွင် ရနိုင်ပါသည်။
သငျသညျလိုလျှင်4fps တွင် 30K ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်၊ သင်သည် 13 GB သို့မဟုတ် ထို့ထက်အထက် iPhone 256 Pro လိုအပ်သည်128 GB storage model မှာကတည်းက၊ ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို 1080 fps တွင် 60 ကန့်သတ်ထားသည်။. Apple ၏အဆိုအရ 10-bit HDR ProRes တွင်တစ်မိနစ်ဗီဒီယိုသည် HD မုဒ်တွင် 1.7 GB နှင့် 6K တွင်4GB ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
iOS 15.1 ပါသည့် iPhone အသစ်၏ ကင်မရာမှတစ်ဆင့် ရရှိနိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များထဲမှ နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တစ်ခုမှာ macro ဖြစ်သည်။ iOS 15.1 ဖြင့် Apple မှ ခလုတ်တစ်ခု ထပ်ထည့်ထားသည်။ အော်တိုမက်ခရိုကို ပိတ်ပါ။.
ပိတ်လိုက်သောအခါ၊ ကင်မရာအပလီကေးရှင်း နှေးကွေးသော Ultra Wide Angle သို့ အလိုအလျောက်ပြောင်းမည်မဟုတ်ပါ။ မက်ခရိုဓာတ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများအတွက်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်ကို ဆက်တင်များ - ကင်မရာတွင် ရနိုင်ပါသည်။
iPhone 12 ဘက်ထရီ စီမံခန့်ခွဲမှု မြှင့်တင်မှုများ
iOS 15.1 သည် ဘက်ထရီ၏ အခြေအနေကို အတိအကျသိရန် algorithms အသစ်များ၊ ဘက်ထရီပမာဏ၏အကောင်းဆုံးခန့်မှန်းချက် iPhone 12 တွင် အချိန်ကြာလာသည်။
HomePod သည် Lossless Audio နှင့် Dolby Atmos ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
HomePod သည် ၎င်း၏ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို 15.1 သို့ မွမ်းမံထားသောကြောင့် iPhone သည် iOS 15.1 နှင့် အရေးကြီးသော သတင်းများကို ရရှိထားပြီဖြစ်သည်။ ဆုံးရှုံးမှုမရှိသောအသံနှင့် Dolby Atmos ပံ့ပိုးမှုအား spatial အသံဖြင့်ထည့်သွင်းခြင်း။
ဤလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်ကို ဖွင့်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို Home အက်ပ်ဖြင့် ပြုလုပ်ရပါမည်။
ထည့်ပြီးပါပြီ automation အစပျိုးမှုအသစ်များ HomeKit-သဟဇာတဖြစ်သောအလင်းရောင်၊ လေထုအရည်အသွေး သို့မဟုတ် စိုထိုင်းဆအဆင့်အာရုံခံကိရိယာမှဖတ်ရှုခြင်းအပေါ် အခြေခံသည်။
iPad ပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်စာသား
လုပ်ဆောင်ချက် စာသားအသိအမှတ်ပြုမှုiPhone ပေါ်ရှိ ကင်မရာမှတစ်ဆင့် ရရှိနိုင်သော Live Text ကို ယခုအခါ iPadOS 15 တွင် ရရှိနေပြီဖြစ်ပြီး စာသားများ၊ ဖုန်းနံပါတ်များ၊ လိပ်စာများကို မှတ်မိနိုင်စေမည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို iPadOS XNUMX တွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
ဤအင်္ဂါရပ်နှင့်အတူ iPads တွင်ရနိုင်သည်။ A12 Bionic ပရိုဆက်ဆာ သို့မဟုတ် အထက်။
ထည့်ပြီးပါပြီ လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များကို စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား GIF ဖော်မတ်ဖြင့် ပုံများ သို့မဟုတ် ဖိုင်များပေါ်တွင် စာသားကို ခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်စေပါသည်။
Wallet တွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးကတ်
COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို ရရှိထားသည့် အသုံးပြုသူများသည် Wallet အက်ပ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ သိမ်းဆည်းပြီး ကာကွယ်ဆေးထိုးကတ်တစ်ခု ထုတ်ပါ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို စာရွက်ပေါ်တွင် ဆောင်ထားစရာမလိုဘဲ လိုအပ်သည့်နေရာတိုင်းတွင် ပြသနိုင်သည်။
ယခုအချိန်တွင်ဤ function ကို ၎င်းကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အချို့ပြည်နယ်များတွင်သာ ရရှိနိုင်သည်။
Photos အက်ပ်လီကေးရှင်းက တင်ပြသည့်အခါ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးသည်။ မမှန်မကန်ဖော်ပြသည်။ ဗီဒီယိုနှင့် ဓာတ်ပုံများကို တင်သွင်းသည့်အခါ သိုလှောင်မှု ပြည့်သွားပါသည်။
အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုမှ အသံဖွင့်သည့်အခါ ဖြစ်ပွားသည့် ပြဿနာ မျက်နှာပြင်ကို လော့ခ်ချသောအခါ ခေတ္တရပ်ထားသည်။
iOS 15.1 ဖြင့် ၎င်းသည် အဆိုပါပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးထားသည်။ ရရှိနိုင်သော Wi-Fi ကွန်ရက်များကို ရှာဖွေရန် စက်ပစ္စည်းအား ခွင့်မပြုပါ။
MacOS 15 Monterey ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။
Apple မှ iOS 15.1 ကို ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်အတူ ၎င်းကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ macOS Monterey နောက်ဆုံးဗားရှင်းSharePlay ကဲ့သို့သော iOS တွင်ရရှိနိုင်သည့် အင်္ဂါရပ်အချို့ကို မိတ်ဆက်ပေးသည့် ဗားရှင်းအသစ်။
လောလောဆယ်တော့ function ပေါ့။ Universal ထိန်းချုပ်မှုMac မှ iPad တစ်ခုသို့ မော်နီတာအား တိုးချဲ့နိုင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို မရရှိနိုင်သော်လည်း လာမည့်ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း Apple ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
macOS Monterey ကြိုဆိုပါတယ်။ ဖြတ်လမ်းများ၊ ကွန်ကရစ်မုဒ်နှင့် iOS 15 ၏ Safari တို့ကို အသစ်ပြန်လည်ပြုလုပ်ထားသည်။. ဤဗားရှင်းအသစ်သည် macOS Big Sur ကဲ့သို့သော ကွန်ပျူတာများနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 15 » iOS 15.1 မှာအသစ်အဆန်းတွေ
Apple Fitness+ နှင့် Apple One Premiere တို့ကို လာမည့်အပတ်မှ စတင်၍ ရရှိနိုင်ပါသည်။